‘तयारी सोचे अनुसार हुन सकेन’ – प्रशिक्षक दास | Hamro Khelkud
‘तयारी सोचे अनुसार हुन सकेन’ – प्रशिक्षक दास
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– आईसीसी यू–१९ विश्वकप छनोटको लागि नेपाली यू-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको खेलाडी छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अप्रिल १२ देखी १८ सम्म मलेसियामा हुने प्रतियोगिताको लागि टियू क्रिकेट मैदानमा छनोट जारी छ ।
प्रारम्भिक छनोटमा सहभागी ५२ जना खेलाडीबाट भारत जानु अघि १८ सदस्य टोली घोषणा हुने छ । भारत भ्रमणपछि विश्वकप छनोट खेल्ने १४ सदस्य टोलीको घोषणा हुने छ । बिहीबार अन्तिम अभ्यास खेलपछि १८ सदस्य टोलीको घोषणा हुनेछ । नेपाल, कुवेत, मलेसिया, यूएई, ओमान र सिंगापुर गरि ६ राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा शीर्षस्थानमा रहने टिमले सन् २०२० मा दक्षिण अफ्रिकामा हुने यू१९ विश्वकप खेल्न पाउने छ ।
त्यसअघि प्रशिक्षक विनोद दाससँग यू१९ विश्वकप छनोटसँग सम्बन्धीत रहेर हाम्रो खेलकुदले गरेको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश :
खेलाडी छनोट कसरी चलि रहेको छ ?
झन्डै ५० जना खेलाडीलाई हेरेका छौं । कम्तिमा एउटा खेलाडीलाई दुई-तीन अभ्यास खेलमा सहभागी गराएका छौं । यसै प्रर्दशनबाट बिहीबार अन्तिम अभ्यासपछि भारत भ्रमणको लागि १८ सदस्य टोली घोषणा गर्ने छौं । १६ मार्चसम्म भारत जानेछौं । भारत भ्रमणका आधारमा १४ सदस्य टोली घोषणा गर्नेछौं ।
भारतमा हामीले कस्तो स्तरको टिमसँग खेल्छौं ?
हामीले भारतीय आन्द्र प्रदेश स्टेट क्रिकेट एसोसिएसनसँग कुरा गरेर जान लागेका हौं । आशा छ हामीले राम्रो टिम पाउने छौं । रणजी ट्रफी खेलेका खेलाडीहरु सम्मिलित टिम पाउने आशा छ ।
हामीहरु प्राय भारतमै अभ्यास गर्न जानुको कारण ?
सजिलो भएर । यात्रादेखि अन्य सबै पक्षमा खर्च पनि कम हुन्छ । राम्रो टिम पनि पाउँछौ । क्यान नभएको अवस्थामा बाहिर गएर खेल्न पनि कठिन छ । भारतीय कोच र स्टेटहरुलाई हामीले आग्रह गर्दा सजिलै मान्नुहुन्छ पनि ।
प्रतियोगितामा तुलनात्मक रुपमा हामी बलिया टिम हौं ?
यू१९ क्रिकेट हो । हरेक एक दुई वर्षमा खेलाडी परिवर्तन हुन्छ । एक वर्षमा धेरै फरक हुन्छ । हामी पहिला बलियो थियौं । अरु टिम कस्ता छन् त्यो थाहा छैन । हाम्रो तर्फबाट पुरै तयारी गरेर जाने छौं । हामीले ती टिमसँग खेलेको एक वर्ष अगाडी हो । एक वर्षमा धेरै परिवर्तन हुन्छ । सिनियर टोलीमा एउटै खेलाडी ४-५ वर्ष खेल्ने हुनाले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । तर यू१९ मा हरेक वर्षमा परिवर्तन हुन्छ । युएई र ओमनमा त स्थानीयभन्दा पनि पाकिस्तान र भारतबाट बसेका खेलाडी खेल्ने गर्दछन् । हामीनै बलिया टिम हौं भन्न त मिल्दैन । तर हामी एउटा बलियो टिम भने हुनेछौं । हामीसँग यसभन्दा अघि यू१९ खेली सकेका ६-७ जना खेलाडी पनि छन् ।
रोहित पौडेल, सन्दीप जोरा र भीम सार्कीजस्ता खेलाडी टिममा हुँदा कप्तानीमा परिवर्तन हुन्छ की आसिफ शेखलाई नै निरन्तरता दिनुहुन्छ ?
हामीले अहिले रोहित र आसिफ दुवैलाई कप्तानी दिईरहेका छौ, अरु खेलाडीहरुलाई पनि कप्तानको रुपका प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौं । पहिला राम्रो टिम छनोट गरौं, त्यसपछि कप्तान छनोट गरौंला ।
हाम्रो बलियो पक्ष के हो ?
सम्रगमा हामी यू१९ स्तरमा बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डीङमा राम्रो गर्दै आएका छौं । पछिल्ला दुई तीन वर्षमा ब्याटिङ राम्रो भएको छ । अझै सुधार गर्न केहि समय लाग्छ । सम्रगमा ब्याटिङमा केहि मेहनत गुर्न पर्छ । बलिङमा नयाँ प्रतिभा पनि आएका छन् ।
खेलाडीहरुको तयारी कस्तो भई रहेको छ ?
अहिले सम्म खेलाडीहरु तयारी सोचे अनुसार हुन सकेको छैन । कसैले ठूलो रन बनाउन सकेको छैन । सबै २० देखि ३० रनमा रन बनाइरहेका छन् । हामीले चाहेका थियौं कुनै नयाँ खेलाडी आएर ठूलो इनिङ खेलोस । त्यो देख्न पाइएको छैन ।
हरेक खेलमा जितबाहेक अन्य कुनै विकल्प पनि छैन, त्यहि लक्ष्यका साथ जान्छौं । सिधै उपाधिमा आँखा गाड्नु भन्दापनि पहिला हाम्रो क्षमतामा ध्यान दिने गर्छौं र हरेक म्याच फाइनल सम्झेर खेल्ने छौं ।